Home Wararka Gudaha Maxay ka wada hadleen Madaxweyne Xasan Sheekh & Guddoomiyaha Aqalka Sare?
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa Halka uu degan yahay ku qaabilay Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdillaahi oo hambalyo iyo salaan ugu tagay.
labada mas’uul oo kulankooda uu saacado badan socda ayaa isla qaatay in si wadajir ah loo dardargaliyo howlaha hortabinta leh ee hor yaalla Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa tan iyo markii la doortay 15-kii Bishaan waxaa uu waday kulamo kala duwan, waxaana dhawaan la filayaa in uu xilka kala wareego Madaxweynaha Xafiiska sii jooga ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Previous articleHowlgal lagu qabtay Xubin katirsan Al-Shabaab oo laga sameeyay Shabeellaha Hoose
Next articleSoomaaliya iyo Hey’adda IMF oo gaaray heshiis cusub kadib wadahadalkii ay la yeesheen Madaxweynaha cusub Mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Daawo:- Muqaal Madaxweynaha Kenya oo caleemo-saarka Xasan ka shaaciyay tallaabo uu...